Ireo tranokala manome aingam-panahy indrindra tamin'ny 2015, hoy i Awwwards | Famoronana an-tserasera
Andro vitsy lasa izay dia nanao famerenana kely momba ny fironana mahavariana indrindra tamin'ny taon-dasa tamin'ny famolavolana tranonkala izahay ary anio dia ho hitantsika ny fomba nampiharana ireo endri-javatra ireo tamin'ny tranokalan'ny orinasa, fikambanana ary mpanakanto samy hafa tamin'ny alàlan'ny Mandrosoa, tranonkala iray manome loka ireo pejy manintona sy manome aingam-panahy indrindra isan-taona. Raha mitsidika ny tranonkalany ianao dia hahita tranokala mamorona be dia be izay hanome aingam-panahy anao rehefa miasa.
Ity misy famakafakana ny folo amin'ny ireo tranonkala tsara indrindra manome aingam-panahy indrindra nomen'ny 2015 anay:
Ao no ahitantsika endrika tsy misy fangarony, minimalista ary tena mandevona. Izy io dia famolavolana paralaks izay mizara roa ny efijery ary mamaly ny fihetsiky ny totozy ny ambadika. Manolotra loko maivana sy manaitra ary horonam-boky lalina izay hampiharihary ny pejy tsirairay nizarana ny tranonkala. Manolotra ihany koa ny fahafaha-mivezivezy amin'ny menio mahazatra raha tiantsika ilay izy ary noho izany dia tsy maintsy tsindrio fotsiny ny bokotra eo amin'ny faritra havia ambony.
Manolotra famolavolana izay ahitana ny lanjan'ny sary sy sary be lanja. Manolotra fomba fampisehoana isan-karazany izy hamakivakiana ny atiny ary singa marobe marobe mampiseho sary mihetsika tsotra toy ny logo izay aseho amin'ny fomba tsara sy ratsy. Ho fanampin'izay, ampiasaina amin'ny endriny mahery ny endritsoratra ary re ny bokotra. Ny seta dia minimalista, avant-garde ary manintona.
Tsotra sy manintona izaitsizy. Izy io dia mampiseho ambadika misy loko fisaka sy malefaka izay anehoana zavatra iray izay mihodina eo aminy rehefa misosa ny kursor amin'ny efijery isika. Ho fanampin'izay, isaky ny mikitika isika dia miova ny lokon'ny afara sy ny zavatra, mamadika azy io ho zavatra liana liana ary miaraka amina lamaody Retro mahafinaritra. Tsy isalasalana fa harena nalaina tamin'ny taona valopolo taona, namboarina sy nohajaina tamim-pahefana lehibe.
Tolo-kevitra ara-dalàna nefa miaraka amin'izay ihany koa izay ampiasain'ny tanora minimalism sy ampiasana fampisehoana indroa mba hanehoana ny ao anatiny, ary koa mampiseho ny fikasihan-doha sasany. Miova ny fiaviany isaky ny manavao ny pejy lehibe amin'ny endrika, endrika, endrika taovolo ary zavatra samihafa toa ny bobongolo isika.
Ny ohatry ny masoivoho Epic dia mety ho voaravaka kokoa nefa tsy dia tsara tarehy. Ao anatin'izany dia ampiasaina ny sary mihetsika sy horonan-tsary hamenoana ny toerana iainana ary ny tetezamita mandingana dia ampiasaina hamakivakiana ny atin'ny tranonkala. Toy ny hoe katalaogy mampiseho ny asany tsara indrindra izy, mizara roa ny fizarana roa tena hafa.
Ny tolo-kevitr'i Posterle dia psychedelic be, izay ampiasaina ho toy ny fiavian'ireo horonan-tsary samihafa izay atakalo isaky ny tsindrio ny bokotra havia amin'ny totozy ary miaraka amin'izay dia mitarika antsika amin'ny faritra tsirairay avy. Ny ankamaroan'ny toerana misy antsika dia feno sary maneso sy mahavariana: lollipop, tratra, akondro, serizy ... Ary toy ny teny filamatra: Fizahana am-pitiavana ireo fanodikodinana amin'ny vanim-potoana niomerika. Tsy isalasalana fa lehibe sy mahatalanjona, tany am-boalohany. Tokony ho hitanao io!
Ny tranokalan'ity orinasa mpamokatra ity dia mampiseho famaranana madio sy kanto izay anjakan'ny sary sy ny horonan-tsary. Ny tetezamita rehefa mandeha amin'ny sokajy iray mankany amin'ny iray hafa dia tena manintona ary ny pejy voalohany dia ampidirina amin'ny fitambarana mainty sy fotsy.
Ny tranonkalan'i Benjamin Guedj dia manolotra endrika paralaks izay manambara ny faritra misy azy miaraka amina loko, endritsoratra ary sary tena mirindra. Ny endriny dia fisaka, tsotra, mailaka ary mavitrika.
Raha ampitahaintsika amin'ireo pejy sisa notanisaintsika izy, dia mety ho fomba nentim-paharazana kokoa io. Amin'ny maha lohateny antsika dia mahita horonan-tsary misy ny sary famantarana ny orinasa sy ny tsipika mitsangana izahay mba hampisehoana ny atiny isaky ny tetezamita.
Ity fandinihana ity dia aseho amintsika ireo karazan'olona hafahafa sy fiaviana. Tena tany am-boalohany sy mahafinaritra izany.
Ary farany, amin'ity ohatra ity dia hitantsika ny endrika mahomby sy mazava ary mazava izay hahafahantsika mivezivezy ao anatiny amin'ny alàlan'ny fikororohana sy ny fisehoantsika amin'ny fomba kamo. Fomba iray izay safidy tena tsara raha manandrana manolotra atiny maro karazana amin'ny fomba mavitrika sy mazava ary madio isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ireo tranokala manome aingam-panahy indrindra tamin'ny 2015 hoy i Awwwards
Wacom dia mitondra Bamboo Paper mankany Windows 10 ho fampiharana manerantany